Ny lazain’ireo blaogera Salvadoriana — tsy afa-miala amin’ny lasa · Global Voices teny Malagasy
Raha nanao heloka bevava, mbola azo fidiana ho filoha ve?
Voadika ny 05 Mey 2019 7:04 GMT
Mbola miseho any amin'ireo vaovao avy any El Salvador foana ny angatr'ireo ady an-trano nandritra ny roa ambin'ny folo taona nisy tany El Salvador. Voalohany, nisy aloha ilay tantara nikasika an'i Will Salgado, ben'ny tanànan'i San Miguel . Tamin'ny 29 Janoary, namoaka tantara fandrakofana mikasika ny vokatr'ilay ady an-trano ny Washington Post, izay niantomboka tamin'ireto fehezanteny maro manintona ny saina ireto:
Milaza i José Wilfredo Salgado fa nanangona ireo karandohan-jazakely ho toy ny amboara tany amin'ny andian-taona 1980 tany rehefa niady tamin'ny naha-miaramilan'ny governemanta azy tao anatin'ilay ady an-trano tany El Salvador. Tena niasa tsara toy ny fametrahan-jiro izy ireny, araka ny fitadidiany, ary tsaratsara kokoa, toy ny mpitondra vintana.
Nalaina tamin'ireo vata-mangatsiakan'ireo niharam-bono tamin'ny famonoana faobe tao El Mozote tao amin'ny faritanin'i Morazan izay niseho tamin'ny Desambra 1981 ireo karandoha ireo. Nanao tafatafa mivantana tamin'ny gazety El Faro i Salgado, izay andavany ho tsy nilaza zavatra toy izany, saingy mifikitra amin'ilay tantara ny mpanao tatitra tao amin'ny Washington Post.
Tsy isalasalàn'ny blaogera Jjmar ny hoe tena nanao ireo fanambarana voalaza ireo i Salgado, ary manontany tena ny zavatra lazain'izany [ES] ho an'ny fireneny hoe heverina toy ny ben'ny tanàna malaza ao amin'ny tanàna lehibe ary heverina toy ny kandidà ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2009 ny olona toy izany. Mitodika amin'i Salgado i Ixquic ary mahita mpanao politika iray miaraka amin'ny antso fambaboana vahoaka [ES] izy, ”Robin Hood”, izay nivarotra ny tenany tamin”ny fitambaran'ny mpifidy sy ireo olona nividy ny asa naha-mpivarotra azy. Toa tsy misy dikany na tsara na ratsy ireo vaovao mikasika azy.
Maniry ny tsy hanaovan'ny olona toa an'i Will Salgado sy ireo mpitarika miaramila tamin'ilay ady tafatafa ho an'ny gazety [ES] i Tepezcuintly, fa ny hanampian'izy ireo hamoaka izay vaovao mikasika ny nahazo ireo olona an'arivony maro mbola tsy hita foana hatramin'ny niafaran'ilay ady. Nahatonga fitsidihana iray nataon'ireo iraka sasany tao amin'ny Firenena Mikambana tany El Salvador tamin'ny 5 febroary ny zava-nanjo ireo olona mbola tsy hita hatramin'izao. Ao anatin'ireo vondrona mpiasa ao amin'ny Firenena Mikambana izay natokana manokana hanadihady ireo fanjavonana an-tery any amin'ireo firenena miaina ady izy ireo.
Ny Lehiben'ny tafika taloha, Roberto D'Aubuisson no atidohan'ireo fanjavonana sy famonoana olona maro nandritra ireo 12 taona nisiana ady an-trano tao El Salvador teo amin'ny tafiky ny governemanta sy ireo mpanao ady anaty akata. Izany no famintinan'ny tatitra iray avy tamin'ny Vaomieran'ny Fahamarinana avy tao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1993. Efatra ambinifolo taona taty aoriana, nikatsaka ny hampiditra fepetra iray hametraka an'i D'Aubuissonho ho toy ny ”Zanakalahin'ny Voninahitra Lehibe Indrindra” ao amin'ny firenena ny ARENA , antoko teo amin'ny fitondrana tany El Salvador. Nitambatra mba hanohitra izany fanambarana izany ireo blaogera Salvadoriana sy ny Fikambanana Tsy Miankina ary koa ny Biraon'ny zon'olombelona ao amin'ny Fiangonana Katolika ao El Salvador.
Eny àry ny namana, toa tsy maniry ny hahatonga ity taona ity ho taonan'ny fandriampahalemana [ny teny filamatry ny governemanta ho an'ny taona 2007] ireo olona ao amin'ny ARENA [ny antoko eo amin'ny fitondrana] fa ho taonan'ny henatra, hakiviana, fahafahambaràka izany.
Tamin'ny maraina tokony nanadihadiana ilay fanambarana, nivory tao amin'ny Antenimieram-pirenena ireo mpanao fihetsiketsehana. Mpanao fihetsiketsehana maro no nitazona sarin'ilay Eveka novonoina, i Oscar Romero, izay baikon'i D'Aubuisson no namonoana azy. (Hita ao amin'ny blaogin'i Positio Super Martyrio ireo fivoaran'i Romero nankany amin'ny fahamasinana). Nidona tamin'ireo hetsi-panoherana ireo, notsoahana ilay fepetra raha toa ka tokony ho nofidiana.
Farany, manoratra mikasika ny mpanao heloka bevava karazany hafa i Solava. Mamaritra ny fanamaivanana ny aina [ES] eo anoloan'ireo fitsarana tototra olona ao El Salvador izy. Amin'ny fandoavana vola eo amin'ny 1000 ka hatramin'ny 1500 dolara, afaka avotsotra amin'ny fanenjehana ara-pitsarana noho ny fanitsahana sy famonoana zaza ny mpitondra fiara iray. Mety ho fandoavana 5 dolara isam-bolana ho an'ilay fianakaviana izany. Ao anatin'ny toe-javatra mbola isianà raharaha 28.000 miandry fitsaràna, manao tsindry amin'ireo fianakaviana ireo ry zareo mpampanoa lalàna mba haneken'izy ireny ireo fepetra ireo, amin'izay dia sady voavaha ireo fangatahana onitra sy ny fandraisana andraikitra ara-keloka.